Nin hanjabaado been ah u jeedin jiray dadka Yahuudda oo xukun lagu riday - BBC News Somali
Nin hanjabaado been ah u jeedin jiray dadka Yahuudda oo xukun lagu riday
Image caption Michael Ron David Kadar (Midig) ayaa lagu xiray magaalada Ashkelonbishii March 2017
Nin Ameerikaan ah oo asalkiisu yahay Israa'iil ayaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah ka dib markii lagu helay dambi ahaa in uu jeediyay kumannaan hanjabaado been ah oo ka dhan ah xarumaha Yahuuda ee ku yaalla Mraeykanka,UK iyo dalal kale.
Michael Ron David Kader oo 20 jir ah, kana soo jeeda Koonfurta Israa'iil ayaa lagu helay dambigan ah in uu jeediyay in ka badan 2,000 hanjabaad.
Waxa uu ku hanjabay in uu weerari doono iskuulada Yahuuda,xarumaha bulshada,saldhigyada booliiska,garoomada iyo diyaaradaha.
Waxay hanjabaadahani horseedeen in hogaamiyayaasha Yahuuda ay cabsi ka muujiyaan in ay dib u so ifbaxdo Yahuud naceybka.
Bishii February 2017, dhowr iskuul oo ay leeyihiin dadka Yahuuda ah ayaa la bartilmaameedsaday islamarkana Matxafka Yahuuda ee London ayaa dadkii ku sugnaa laga daadgureeyay ka dib hanjabaad weerar oo ninkan ka timid.
Sidoo kale tiro hanjabaado ah ayaa loo jeediyay xarumo ay leeyihiin dadka yahuuda oo ku yaalla Mareykanka iyo waliba safaaradda Israa'iil.
Dambiyada naceybka ku salaysan oo sii kordhaya dalka Mareykanka
"Nabadda Qudus" oo ku xiran wada hadal
Kadar ayaa lagu xiray bishii March 2017 magaalada Ashkelon ee ku taalla Israa'iil ka dib baaritaan wadajir ah oo ay sameeyeen hay'adaha Mareykanka iyo Israa'iil.
Dacwadiisa ayaa lagu sheegay in isaga oo internetka isticmaalaya uu wici jiray Mareykanka,UK,Canada,New Zealand iyo Australia islamarkana uu codkiisa ka dhigayay cod dumar isaga oo isticmaalaya barnaamij Kombuyuutar.
Qaar ka mid ah dambiyadan ayuu galay isaga oo ay da'diisa ka yartahay 18 jir.
Waalidiinta Kadar ayaa waxay ku dodeen uu maskaxda uu jug ka qabo oo ay haysato dhibaato dhanka maskaxda ah.
Balse garsoorayaasha , "in caqligiisu aad u sareeyo islamarkana uu si wanaagsan u gaaranayo ficilada uu samaynayo".
Guddoonka 10 sano ee xariga ah ayaa waxaa riday maxkamad ku taalla magaalada Tel Aviv.